phyobobowin@gmail.com ကိုmail ပို.ပေးနိုင်ပါတယ်ဗျာ…
မန်းတလေးက ဟင်းချက်သင်တန်းတော့ ၀တ်ရည် မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တခြားသိနိုင်မယ့်သူကို မေးပေးပြီ အကြောင်းပြန်ပါ့မယ်..
hello wut yee, if u use Gee mail,,, would u plz add my email shinnemoe@gmail.com
တို့ account ပေးထားပါတယ် ဟင်းအသစ်တွေတင်ရင်
ဝတ်ရည်နဲ့ဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမလဲဟင်မလုပ်တတ်လို့ပြောပေးပါနော် တို့မှာfacebook လိပ်စာတော့ရှိတယ်
kathiking89@gmail.com ပါ လမ်းညွှန်ပေးပါနော်
khin khin nwe says:
nang mynt says:
Htinlin Zaw says:
၀ဘ်ဆိုဒ်ပြောင်းသွားပြီဆိုတော့… Email Subcription ထပ်လုပ်ဖို့လိုသေးလား..
Yeah need to.. Plz do email subcription again. .Thanks
ကျွန်တော်က အိမ်မှာ ဟင်းကောင်းကောင်းတွေ ကိုယ်တိုင်ချက်ချင်တာပါ.. ဒီblogကြောင့် အဆင်ပြေသွားပြီ..
ဟင်းတွေလည်း update လုပ်ပေးပါဦး.. အားပေးနေပါ့မယ်.. ကျေးဇူးပါနော်…
Thanks also par!
I love to cook4my ………….
u toe toe says:
သမီးရေ address ထည့်ပြီး subscribe လုပ်ပေမဲ့ ဦး ရဲ့ mail ထဲ ကို activate ပြန်လုပ်ဘို့mail ၀င်မလာဘူး ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ သမီး ရေ
ဟုတ်ကဲ့။ subscribe လုပ်ဖို့ အီးမေးပို့ထားတယ်လို့ ပြောနေတယ်။ မေးထဲ တချက်လောက် စစ်ကြည့်ပါအုန်းနော်… ကျေးဇူးပါ
ပြည်ပမှာနေတာမို့အချိန်ရတဲ့အခါ
စားချင်တာလေးတွေ သမီး ရဲ့ နည်းအတိုင်း
Thanks also U Toe Toe 🙂
All look like appetite.sis😃